Ivenkile kaMicrosoft yongeza inkxaso kwezinye iivenkile ezikwi-app | IPhone iindaba
IMicrosoft ibhengeze ukuba izakuvula iVenkile kaMicrosoft, ivenkile esemthethweni yesicelo seMicrosoft kwiWindows, ukuze Iivenkile zomntu wesithathu zokusebenza njengeVenkile yeMidlalo ye-Epic kunye neVenkile yeApple yeAmazon.
Ngale ndlela, zombini ezi venkile ziya kufumaneka kubo bonke abasebenzisi kunye Izicelo zinokukhutshelwa kubo njengoko kunokwenziwa namhlanje. UMicrosoft ubanga ukuba olu tshintsho kukuqinisekisa ukuba iimeko zeshishini zilungile.
Kwingxelo apho ukwaziswa oku kuye kwabhengezwa, sinokufunda:
Ukuzinikela kwethu ekubeni "Ivenkile evulekileyo yeqonga elivulekileyo" akuphelelanga kwiziseko ezahlukeneyo zobugcisa bezicelo zokwakha. Ikwa malunga nokuqinisekisa ukuba iimeko zethu zeshishini zilungile kwaye zinceda ukukhuthaza ukuvelisa izinto ezintsha.
Umzekelo, uGcino lweWindows kwiVenkile kaMicrosoft ayisafuni ukuba abaphuhlisi besicelo babelane ngengeniso neMicrosoft, xa usetyenziso lulawula iinkqubo zabo zokuhlawula ngaphakathi kwesicelo.
Ngalo moya, namhlanje sibhengeze olunye uhlaziyo oluphambili kwimigaqo-nkqubo yeVenkile kaMicrosoft kwiWindows, eya kuthi ivumele usetyenziso lwesithathu lesitolo ukuba lubhaqwe kwiVenkile kaMicrosoft yeWindows.
Kwidabi elisemthethweni elijongane neApple kunye ne-Epic kwiinyanga ezidlulileyo nalapho i-Apple yaphumelela khona, inkampani eyadala iFortnite yafuna I-Apple ivumela iivenkile zeqela lesithathu ukuba zifakwe, into njengoko sonke sisazi ukuba akayiphumelelanga, nangona u-Epic efake isibheno kwaye uza kuzama ukutshintsha isigqibo sejaji.
Ukuphela kwempumelelo ye-Epic yayikukuba iApple kufuneka ivumele abaphuhlisi ukuba banike iqhosha okanye ikhonkco kwiiwebhusayithi zabo apho Iinketho zokuhlawula ziyafumaneka ngaphandle kokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba zombini uGoogle noMicrosoft ngoku baxhasa ukhetho ezinye iindlela zokufaka usetyenziso kwiqonga laboOku kunokuba nefuthe kubalawuli abasebenza kumthetho wokuchasana ne-antitrust e-United States nakwamanye amazwe, ukuze kungekudala okanye kamva, i-Apple inyanzeliswe ukuba itshintshe indawo yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » Ivenkile kaMicrosoft yongeza inkxaso kwezinye iivenkile ezikwi-app
I-iPhone 13 Pro Max ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza kwe-27W kodwa hayi ngokuqhubekayo
IiMaphu ezintsha ze-Apple iimephu ze-3D ngoku ziyafumaneka: eLondon, eLos Angeles kunye nangaphezulu